Inflatable Jacuzzi - Iwe unoziva ese ayo makuru mabhenefiti? | Bezzia
Susana godoy | 07/04/2021 16:00 | Musha
Kuve ne inflatable jacuzzi ndiyo imwe yesarudzo dzakanakisa dzeimba yedu uyezve, kune yedu gadheni. Kana isu tiine nzvimbo kumativi ese maviri, inguva yekufunga nezve maitiro ekushongedza nayo uye ndeipi nzira iri nani pane kuzviita uine zano rekuti isu tichazokumbira kwauri nhasi uye kuti iwe uchave uchinyatsochida.
Nokuti kuva nejacuzzi kurota kukuru kwevakawanda. Asi kwete chete kutaura kuti tinayo, asi nekuti zvine mabhenefiti makuru atinofanira kufunga nezvazvo. Chete nenzira iyi, iwe uchajekesa kusahadzika kwekutenga kana kwete, asi isu tato kukuudza iwe kuti resolution ichave yakanyanya kunaka kune iwe nemhuri yese. Tsvaga!
1 Taura hako kuenda kushushikana nekutenda kune inflatable jacuzzi
2 Iwe unozoderedza tsandanyama aches
3 Unogona kuunganidza kana kurikatanura pese paunoda
4 Kuonekwa kweganda kunovandudzika
5 Kurapa kwakakosha kweArthritis
Taura hako kuenda kushushikana nekutenda kune inflatable jacuzzi
Dzese jacuzzi uye Spa, imhando yedziva rine mabhuru ari ekurapa. Saka imwe yemabhenefiti ekutanga avo ndeyekuti inogona kudzikisira kushushikana kwako. Zvirokwazvo hapana zuva raunogona kuzorora zvakakwana. Izvi zvinoita kuti muviri ugare wakakombama nekuda kwebasa, kumba nemamwe matambudziko mazhinji. Nekudaro, kugeza pakati pemabhuru kunozorodza ese iwo makondomu zvikamu uye iwe uchaona zororo rakakura rinouya kubva mukusiya kwakanyanya kusagadzikana kumashure. Wakambozviedza here?
Iwe unozoderedza tsandanyama aches
Tisati tataura nezve kushushikana uye ikozvino chimwe chinhu chine chekuita neimwe nhanho. Nekuti kurwadziwa kunogona zvakare kuve kwakateedzana kwematambudziko akawedzerwa. Kunyanya kana iri mhasuru, iwe unowana hutano ne inflatable jacuzzi. Sezvo pane izvi ichave yega yejeti inobuda mairi ichave iine mukurumbira wese. Chokwadi icho nekumisikidza kutenderera, ichazorodza nzvimbo uye ichikuvadza zvakanyanya kupfuura zvatinofunga. Ichi chikamu chemubatanidzwa wemvura inodziya uye majeti anoshanda. Saka kungova maminetsi mashoma zuva rega rega, isu tinobva takurumidza kuona shanduko yemarwadzo aya.
Unogona kuunganidza kana kurikatanura pese paunoda
Izvo zvakanaka nezve zvese zvinogona kuunganidzwa nekukatanurwa, saka mune ino kesi haisi kumashure kumashure zvakare. Zvichida munguva yechirimo kana yezhizha nguva dzose zvinokurudzirwa kufunga nezve kuiisa kunze, uchiri muchando, unogona kuzvikatanura kusvikira zvaziviswa. Kubva pane izvo isu zvatingati icho chinhu chinoshanda uye icho chinoita kuti chinyatsoita, sekuda kwatinoita. Nekudaro, iyo imwe yeakakwana mapoinzi ekufunga.
Kuonekwa kweganda kunovandudzika
Nekuti haazi ese mabhenefiti anga achienda kunongedzera pane kwedu kwemukati, asi anogona zvakare kuoneka kunze. Izvi zvinoreva kuti iganda rine zvakawanda zvekutaura. Kune rimwe divi inotaridzika kunge yakanyoroveswa. Izvo zvinoita kuti iratidzike kutsetseka uye kuunyana kusununguka panguva imwe chete. Nekudaro, zvirokwazvo iwe haugone kuramba kuramba kutenga inflatable jacuzzi uchiziva kuti kwete chete hutano hwako hunovandudzika zvakanyanya, asi kuti zvese izvi zvichaonekwa kubva kunze.
Kurapa kwakakosha kweArthritis
Chokwadi ndechekuti vamwe hosha dzakadai sedzemabhonzoHavaine kurapwa kwakanyanya. Ndokunge, isu tichafanirwa kugara navo kwenguva yakareba. Asi iwe unogara uchifanira kusarudza dzimwe sarudzo dziri nyore kuti ukwanise kudzikamisa. Ichi ndicho chikonzero tiri kutaura nezveJacuzzi. Mubatanidzwa wemvura uye kupisa kusimudzira mamwe matambudziko ehutano, sezvatiri kuona. Ichokwadi kuti zvirwere zvisingaperi zvicharamba zvichitekeshera asi chaizvo nekutenda padanho iri, isu tichavandudza uye tione shanduko yakanaka
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Inflatable Jacuzzi: Unoziva here mabhenefiti ayo makuru
Uterqüe inopa A la Fresca, yayo nyowani SS21 yekutsikisa imba